I-China GD-EMB-013: ibhayisekile yentaba yombane, i-intshi ezingama-26, ibhetri ye-lithium yabantu abadala abancediswa nge-E-bhayisekile, umzi-mveliso weebike ezimnyama kunye nabenzi | GUODA
I-GD-EMB-013: ibhayisekile yentaba yombane, i-intshi ezingama-26, ibhetri ye-lithium yabantu abadala abancediswa nge-E-bhayisekile, ebike emnyama
I-E-MTB yethu ixhotyiswe ngebhetri ende ye-lithium yebhetri ekwaziyo ukujongana neetoni zokukhwela, ezimfutshane okanye ezinde, iminyaka ezayo. akukho kukhwela ixesha elide, akukho mthwalo unzima kakhulu, kwaye akukho ndawo imilenze yakho ayinakukuthwala.
Ukutshixwa kwemitshini kunye nokutshatyalaliswa kokutsalwa kwegxala lealuminium
I-JAK Ngaphambili nangasemva kwi-disc brake
Umlawuli odibeneyo kwisilayidi
Imoto ekhethekileyo ye-26 intshi yokuhamba ngekhephu
Micro ujike ngokukhawuleza kasi-7
I-26 * 4.0CHAOYANG
Isixhobo sesithathu esikhokelwayo
Ubukhulu: 150 * 30 * 76cm
Iingcebiso: Imveliso ixhasa imibala yesiqhelo, iMoto, ibhetri, amagama eBrand, uLogo kunye nabanye. (OEM & ODM)
Egqithileyo I-GD-EMB-012: Ibhayisekile yentaba yombane, i-36v, ibhetri ye-lithium, imitha ye-LED, amandla ancedisiwe, 200 - 250w
Okulandelayo: I-GD-EMB-014: Inamandla ibhayisekile yentaba, i-36V 250W, imoto ekhwele ngasemva, isakhelo se-alloy
Ibhayisekile yethu yeeNtaba zombane (i-e-MTB) iveliswa ukufezekisa umnqweno wabakhweli wokuya kude, ukukhawuleza, kunye nokufumana amava aphezulu. Yakhelwe kwilifa lesakhelo esomeleleyo kunye netekhnoloji yokumiswa. Iibhayisikile ezincedisa ngombane zandisa amandla akho okuphehla ngelixa usandisa ubumnandi obuya kuba nabo kwindlela. Ezi zeebhayisikile ezikuvumela ukuba uzonwabele ngakumbi kuyo yonke into eyenza ukuba ukuhamba ngeebhayisikile kube kuhle.
I-36V500W i-cruiser yombane
I-alloy eyi-26 intshi ye-cruiser
Ingxubevange yombane cruiser
I-cruise yombane ehamba ngamanqatha